तोरी चिसो, खोकी, रूघाँ प्रयोग भएको एक विश्वव्यापी उपकरण हो। साथै, यस दबाइ दुखाइ को विभिन्न प्रकार को छुटकारा प्राप्त गर्न सक्षम छ। तर प्रयोगको लागि अनुतरदायी मनोवृत्ति छैन। यो आलेख तोरी पकड कति तपाईं भन्नेछु। यस उपकरण प्रयोग को सुविधाहरूको बारेमा जान्न हुनेछ। तपाईं पनि प्रयोगको लागि तयारी निर्देशन बारे कि रिपोर्ट पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछ।
को तोरी, कति पकड उपभोक्ता राय?
तपाईं मानिसलाई यो प्रश्न सोध्न भने, धेरै समय को एक निश्चित रकम कल गर्न आनाकानी गरेनन्। कसैले जल पाउडर संग बैग 20 मिनेट को लागि राखिएको हुनुपर्छ भनेर सोच्छ। अरूलाई लागत उपभोक्ताहरु पाँच मिनेट भन्दा बढी छ। वास्तवमा कसरी सही हुन सक्छ?
एक जल पदार्थ संग बैग - यो खुट्टा र हात, खुट्टा पछाडि, छाती, घाँटी र टाउको मांसपेशीमा लागू गर्न सकिन्छ कि उपकरण हो। जहाँ तोरी राख्न आधारमा, र आफ्नो आवेदन को अवधि निर्धारण गरिन्छ। विशेषज्ञहरु को आधारभूत राय विचार र तपाईं वार्मिंग समय खर्च गर्न आवश्यक कसरी लामो पत्ता।
coughing र श्वसन रोगहरु द्वारा
तपाईं निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, pharyngitis, र अन्य अप्रिय pathologies संग बिरामी छन् भने, तोरी आफ्नो हालत सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। यी उपकरण कफ मदत र यो bronchi हटाउन। जब नम खोकी, तिनीहरूले एक तीब्र रिकभरी योगदान। यी अवस्थामा सुन्तला पाउडर को प्याकेटहरू को छाती र फिर्ता लागू छन्। यसरी यो हृदय क्षेत्र बच्न आवश्यक छ।
यो अवस्था मा तोरी कति पकड? ताप को अवधि 20 मिनेट भन्दा बढी हुँदैन। सामान्यतया प्रक्रिया 7-15 मिनेट छ। तपाईं बलियो जलन महसुस भने, यो निश्चित अवधिको लागि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। तुरुन्त तोरी हटाउन र एक नम कपडा संग छाला RUB।
एक चिसो बाट र चिसो को पहिलो साइन मा
तपाईं सरल महसुस यदि जहां तोरी राख्न? सक्रिय रोग को विकास रोक्न गर्न, खुट्टा को वर्णन हालतमा लागू हुन सक्छ। निम्नानुसार लोकप्रिय उपकरण प्रयोग हुनेछ। पूर्व गीला बिना मोजा आधा तोरी प्लास्टर वरिपरि बार लाउनु।
यो प्रक्रिया को अवधि केही घण्टा छ। रात को लागि एक संकुचन एक स्थिर र राम्रो प्रभाव हासिल गर्न बाँकी गर्न सकिन्छ। तपाईं जलाए प्राप्त हुनेछ चिन्ता छैन। ड्राई तोरी तपाईं कुनै पनि हानि गर्दैन।
को तोरी, अप्रिय भावना छुटकारा प्राप्त गर्न कति पकड? अक्सर यो उपकरण sprains, चोटपटक, टाउको दुखाइ संग मद्दत गर्छ। तथापि, दबाइ गंभीर भडकाऊ प्रक्रिया विरामीहरु मा प्रयोग गर्न सकिँदैन। आवेदन क्षेत्र एक purulent शिक्षा छ भने, तपाईं मात्र आफ्नो हालत worsen गर्न सक्नुहुन्छ।
पहेंलो कार्ड को सहायता संग दुखाइ को सुधार रातो माछा छ। तपाईं एक जलन महसुस गर्न र पूर्ण बेचैनी बारेमा भूल थाल्छन्। यस मामला मा, बलियो दबाइ को प्रभाव, अधिक तपाईं प्राप्त प्रभाव उच्चारण। यस मामला मा तोरी, तपाईं 20-30 मिनेट सम्म राख्न सक्नुहुन्छ। तर हामी बलियो जलन सहन हुँदैन। अन्यथा, तपाईं जलाए सक्छ। फिर्ता (उच्च रक्तचाप को उपचार मा) मा तोरी बैग 20 मिनेट भन्दा कुनै पकड।
उपचार समयमा, छोराछोरीलाई अक्सर आमाबाबुले तोरी प्रयोग गर्नुहोस्। तर, यो बच्चाहरु धेरै नाजुक, संवेदनशील छाला छ कि सम्झना गर्नुपर्छ। हामी उनको लागि पाँच अधिक मिनेट बैग जल छोड्न सक्नुहुन्न। एक बाधा रूपमा पातलो डायपर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि 10 मिनेट भिजेको दिनुभयो।
तोरी wraps बारेमा 10-15 मिनेट छोड्नुहोस्। तिनीहरूले पानी मा तोरी प्लास्टर dissolving र त्यसपछि समाधान गरे तौलिया soaking गरेको छन्। साथै, छोराछोरीलाई सक्नुहुन्छ तोरी संग खुट्टा ऊंची उडान भरना एक झोला बाट। यस्तो हेरफेर 10 20 मिनेट को एक औसत रहन्छ। पानी तापमान 40 उच्च भन्दा डिग्री हुँदैन भनेर नबिर्सनुहोस्। यो 33-35 सुरु हुने, बिस्तारै वृद्धि गर्न आवश्यक छ। प्रक्रिया पछि नम कपडा संग बच्चा गरेको छाला हटाउन भूल छैन। राता भने बच्चा क्रीम को सतह चिकनाना।
तोरी मलहम को प्रयोग
पाउडर जल संग बैग सर्वश्रेष्ठ एक डाक्टर लागू गरिएको छ। मात्र एक डाक्टर यो उपकरण प्रयोग सबै सुविधाहरूको बारेमा बताउन सक्छ। डाक्टर पनि कसरी पहेंलो कार्ड राख्न र यसलाई कति समय राख्नुपर्छ व्याख्या गर्नुपर्छ।
अक्सर उपभोक्ताहरु सकेसम्म एक तापमान मा तोरी कि सोधे छन्। नकारात्मक यो प्रश्नको जवाफ। यो कार्य तपाईंलाई मात्र स्थिति बढन र आफ्नै उच्च ज्वरो प्रकुपित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि एलर्जी को उद्भव को संभावना मा वर्णन हालतमा प्रयोग गर्न सक्दैन। उपचार पछि यो एक भिजेको तौलिया संग छाला सफा गर्न आवश्यक छ। सही उपचार, शुभकामना!
तपाईंलाई स्वास्थ्य पुनर्स्थापना प्रभावकारी तरिका देख रहे हो? रोलर मालिश प्रयास
इंटरफेरन मानव - जैविक गुण
प्रश्न: एक लामखुट्टे चिलाउनु किन दु: ख गर्छ?
टाटा घर? रूस मा राष्ट्र को इतिहास
नाक मा "डाइओक्साइडिन"।
टाइलहरू र laminate फर्श बीच जोइन्टहरूमा: जडान विधिहरू को एक समीक्षा
"कहिल्यै Aredovy": मान, इतिहास, र उदाहरण को प्रयोग
Ithaca, ओडीसियस वा कसले को दिग्गज राजा छ
के खाद्यान्न प्रोटिन समावेश